Oxytocin သည်လူမှုဆက်ဆံရေးတွင်အမ်ဖီတမင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်သောလိုငွေပြမှုများကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးသည်။ နျူကလိယနှင့်အဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှုအတွက်သက်သေအထောက်အထား (၂၀၁၄) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On
J ကို neuroscience ။ 2014 Jun 18;34(25):8499-506. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4275-13.2014.
လူငယ်တို့ ka1, လျူ Y ကို2, Gobrogge KL2, ဝမ် H ကို2, ဝမ် Z ကို1.
မူးယစ်ဆေးစွဲလူမှုရေးအပြုအမူတွေအပေါ်အကျိုးဆက်များဖျက်ဆီးအားကြီးမားခဲ့ပြီးနှင့်လူမှုရေးဘွန်း၏ချွတ်ယွင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ သက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry အတွင်း oxytocin မြားတှငျပွောငျးလဲ (OT) နှင့် dopamine (DA) neurotransmission ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။
ကျနော်တို့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (Microtus ochrogaster) အရွယ်ရောက်ပြီးသူအိမ်ထောင်ဖက်အကြားတစ်စုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အမြဲတည်သောဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့် -a လူမှုရေးအရ monogamous ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီး, ဒီဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်လူမှုရေးလိုငွေပြမှုဘို့အချိန်ပို၏ကုထုံးအလားအလာစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကျနော်တို့လေ့နှိပ်စက် psychostimulant စိတ်ကြွဆေး (AMPH) ကိုထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး (pair တစုံဘွန်း၏အညွှန်းကိန်း) ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ AMPH ထိတွေ့မှုလည်းမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖျန်ဖြေကြောင်းဒေသများတွင် OT နှင့် DA neurotransmission ပြောင်းလဲ: ကအသီးသီး, အ medial prefrontal cortex (mPFC) နှင့်နျူကလိယ accumbens (NACC) တွင်အချိန်ပိုနှင့် DA D2 အဲဒီ receptor immunoreactivity လျော့နည်းသွားနှင့် NACC DA အဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
တိုက်ရိုက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးများနှင့်ပြောင်းလဲ NACC DA အဆင့်ဆင့်ပွနျလညျထူထောငျ, ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုညီလေးအဲဒီ receptor activation အပေါ်မှီခိုခဲ့ AMPH-ထိတွေ့ voles ၏ mPFC သို့ညီလေး၏အုပ်ချုပ်ရေး။ အတူတူအဲဒီဒေတာထပ်ခါတလဲလဲ AMPH ထိတွေ့မှုတစ်ခု OT-mediated ယန္တရားမှတဆင့် pair တစုံဘွန်းချို့ယွင်းခြင်း, ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry အတွင်း OT နှင့် DA စနစ်များကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်လူမှုရေး Bond အကြားရှုပ်ထွေးကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင်းကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နောက်ထပ်အဲဒီရလဒ်များအလယ်ပိုင်း OT system ကိုစွဲလမ်းအတွက်လူမှုရေးလိုငွေပြမှု၏ကုသမှုများအတွက်အရေးပါသောပစ်မှတ်ကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါစိတ်ကူးများအတွက်ပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုပေး။
စွဲ; စိတ်ကြွဆေး; dopamine, oxytocin; လူမှုရေးစဘွန်း